IAzerbaijan Ivalela AmaNgqina KaYehova Ngenxa Yokholo Lwawo
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiArmenia IsiBhulu IsiChichewa IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKikaonde IsiKinyarwanda IsiKirundi IsiKorea IsiLithuania IsiMalagasy IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTurkish IsiUkrainian IsiXhosa IsiYoruba
Andile amabanjwa avalelwe ngenxa yezazela zawo eAzerbaijan njengoko amanye amaNgqina KaYehova evalelwe kwangaphambi kokuba kuthethwe ityala ukuze angakwazi ukunqula. Funda inqaku elithi “Kuyanda Ukungathandwa Konqulo EAzerbaijan”
Umgaqo-siseko waseAzerbaijan uyabavumela abantu abangafuniyo ukuya emkhosini ukuba benzele ilizwe labo eminye imisebenzi, kodwa okwangoku urhulumente akakawumisi umthetho ocacisa ukuba yiyiphi kanye kanye le misebenzi inokwenziwa. Ngenxa yoku, amaNgqina kaYehova angavumiyo ukuya emkhosini ngenxa yezazela zawo arhuqelw’ ezinkundleni aze athothoziswe kwizisele ezimnyama.
IAzerbaijan Ayenzanga Njengoko Ibithembisile
Kuba ibifuna ukuba yinxalenye yeBhunga laseYurophu ngo-1996, iAzerbaijan yathembisa oku (1) ukuba nomthetho oza kubangela kubekho eminye imisebenzi enokwenziwa ngabantu abangafuniyo ukuya emkhosini kungekadluli iminyaka emibini yokuba iyinxalenye yeli bhunga (2) ukukhulula amabanjwa avalelwe ngenxa yokwala ukuya emkhosini (3) ukuvumela abantu abangafuniyo ukuya emkhosini ukuba benzele ilizwe labo eminye imisebenzi. Sele kudlule iminyaka engaphezu kweyi-13 iAzerbaijan yamkelwe liBhunga laseYurophu, kodwa izinto azikatshintshi.
Ingxelo yango-2011 ekhutshwe yiKomishoni Elwa Ubuhlanga yeBhunga laseYurophu yathi kwabasemagunyeni baseAzerbaijan: “Le Komishoni ibongoza ukuba nithobele umthetho nize nibe nemisebenzi eza kwenziwa ngabantu abangafuniyo ukuya emkhosini. . . . Okunye nimele ningabasi enkundleni okanye nibavalele entolongweni abantu abangavumiyo ukuya emkhosini kodwa nimele nibavumele benzele ilizwe labo eminye imisebenzi.”
Umfana Oye Wanyanzelwa Ukuba Aye Emkhosini Novalelwe Ngokungekho Mthethweni
Urhulumente waseAzerbaijan akawaboneli ntweni amalungelo abantu abangafuniyo ukuya emkhosini ngenxa yezazela zabo. NgoAgasti 23, 2013, uKamran Shikhaliyev ona-17 noliNgqina likaYehova, waya kuxilongwa kwiOfisi Yengingqi EseBaku Nizami enento yokwenza nomkhosi welo. Wathi eselapho, kwafuneka acacise ukuba, kuba isazela sakhe singamvumeli, akazi kukwazi ukuya emkhosini waza wacela ukwenza eminye imisebenzi. Ngo-Oktobha 8, 2013, lo kaShikhaliyev wasibhala phantsi isigqibo sakhe sokucela ukungayi emkhosini waza wasifaka kule Ofisi. Xa wabuyela kule Ofisi ngo-Oktobha 10, 2013, abasemagunyeni baseAzerbaijan bamnyanzela ukuba angenele umkhosi yaye apho wathothoziswa esiseleni ukuza kuthi ga ngoku.
Emva kweenyanga ezingaphezu kwezintandathu evalelwe, ngoAprili 16, 2014, iNkundla yoMkhosi yaseJalilabad yamgweba ukuba ahlale unyaka ngapha kwezitshixo. Inkundla yamjonga njengejoni eliye lala ukuya emkhosini. Ukongezelela lo mfana akazange ale ukuya kule Ofisi kodwa wayesiya sihlandlo ngasinye ebizwa yiyo aze aphinde achaze ukuba isazela sakhe asimvumeli ukuba aye emkhosini.
Isibheno sikaShikhaliyev sabethwa phantsi yiNkundla YaseShirvan ngoJulayi 16, 2014. NgoDisemba 2014, umkhosi wamthumela kwindawo awayeza kuthothoza kuyo eSalyan, eAzerbaijan, kodwa akukacaci enoba umkhosi sele uqalisile kusini na ukubala isigwebo sakhe. Ngamanye amazwi, akakasiqalisi isigwebo sakhe sonyaka nangona wavalelwa ngo-Oktobha 2013. Lo kaShikhaliyev unethemba lokuba iNkundla Ephakamileyo yaseAzerbaijan iza kusivuma isibheno ize igob’ uphondo kwilungelo lakhe lokungayi emkhosini ngenxa yesazela.
Ukuze ubone uludwe lwawo onke amaNgqina kaYehova avalelwe ngenxa yokholo lwawo eAzerbaijan, cofa le linki ingezantsi.
NgoFebruwari 17, 2015
INkundla YeNgqingqi YaseSabail eseBaku iyalela ukuba uIrina Zakharchenko noValida Jabrayilova bathothoze esiseleni iinyanga ezintathu kwangaphambi kokuba kuxoxw’ ityala abatyatyekwa lona lokuhambisa iincwadi zonqulo ngokungekho semthethweni.
UKamran Shikhaliyev uthunyelwa kwisisele esiseSalyan, eAzerbaijan.
UKamran Shikhaliyev usavalelwe ngokungekho mthethweni yaye akakaqali ukuthothozela isigwebo sakhe sonyaka.
NgoAprili 16, 2014
UKamran Shikhaliyev ugwetyelwa unyaka entolongweni kuba engafuni ukuya emkhosini.
Ngo-Oktobha 10, 2013
IOfisi Yengingqi eseBaku Nizami enento yokwenza nomkhosi welo, yanyanzela uKamran Shikhaliyev ukuba aye umkhosi.
NgoMatshi 12, 2013
UKamran Mirzayev, oliNgqina likaYehova, uyavalelwa aze agwetyelwe iinyanga ezisithoba entolongweni kuba engavumi ukuya emkhosini. Kamva xa wayesathothoza, wakhutshwa ngaphambi kwexesha.
NgoSeptemba 25, 2012
UFakhraddin Mirzayev, oliNgqina likaYehova, uyavalelwa aze agwety’ unyaka entolongweni kuba engavumi ukuya emkhosini.
NgoSeptemba 8, 2010
UFarid Mammadov, oliNgqina likaYehova, uyavalelwa aze agwetyw’ iinyanga ezisithoba entolongweni kuba engavumi ukuya emkhosini.
NgoAgasti 19, 2009
UMushfig Mammedov uyavalelwa kuba engavumi ukuya emkhosini, ibe xa wala okwesihlandlo sesibini wahlawuliswa.
NgoMatshi 7, 2008
Amagqwetha kaMushfig Mammedov noSamir Huseynov afaka isibheno nxamnye neAzerbaijan kwiNkundla YaseYurophu Yamalungelo Abantu.
Ngo-Oktobha 4, 2007
USamir Huseynov, oliNgqina likaYehova, uyavalelwa aze agwetyw’ iinyanga ezilishumi entolongweni kuba engavumi ukuye emkhosini.
UMushfig Mammedov oliNgqina likaYehova uyavalelwa aze agwetyw’ iinyanga ezintandathu entolongweni kuba engavumi ukuya emkhosini.